प्रिय काठमाडौंका कुकुरहरू ! काठमाडौंका कुकुरलाई जर्मनीबाट मन छुने पत्र ! « Sajha Page
प्रिय काठमाडौंका कुकुरहरू ! काठमाडौंका कुकुरलाई जर्मनीबाट मन छुने पत्र !
प्रकाशित मिति: September 1, 2017
हामीले थुप्रै तिम्रा साथीलाई क्यानेडियन, अमेरिकन, जर्मन र अस्ट्रियन बनाइसकेका छौं । नयाँ परिवारमा तिमीहरूको खुसी अनुहार देख्ने नै हाम्रो धोको हो । तिम्रो आफै
जन्मेको देशमा त्यो सम्भव भएन । हामीले गर्नै पर्‍यो ।
प्रिय कुकुरहरू, तिमीहरू सबैलाई उद्वार गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन, तर केहीलाई भएपछी खुशीको जीवन दिन पक्कै सकिन्छ । सधैं यस्तो हुने छैन । एउटा ठूलो आशा छ, नयाँ नेपाली पुस्ताले तिमीहरूको चासो लिने छ । महात्मा गान्धीको भनाइ छ: ‘देशको महानता मापन त्यो देशमा जनावरलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्नेबाट हुन्छ ।’एउटा ठूलो आशा छ, नयाँ नेपाली पुस्ताले तिमीहरूको चासो लिने छ ।
(अमेरिका नेपालको सहयोगमा,अमेरिका नेपालमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)